Iswada iibinta - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Qalabaynta iibintu waa nidaam loogu talagalay inuu kaa caawiyo inaad natiijooyin wanaagsan ka hesho kooxda iibkaaga adoo ka saaraya waqti -qaadasho iyo hawlo soo noqnoqonaya waajibaadkooda maalinlaha ah. Hadafka otomaatiga iibinta ayaa ah inuu kaa caawiyo inaad wax badan ku qabato waqti yar si aad waqti badan ugu qaadato sameynta waxyaabaha ugu muhiimsan ganacsigaaga iyo xirfaddaada. Awood u lahaanshaha otomaatiga ah ee howlaha iibka si dadka wax iibiya ay diiradda u saaraan waxyaabaha ugu muhiimsan, sida xiritaanka heshiisyada. Dadka wax iibiya ayaa waqti yar ku bixin doona shaqada maamulka iyo waqti badan oo ku aaddan raadinta, xiritaanka heshiisyada, iyo iibinta. Waa hab wanaagsan oo aad ku xoreyn karto waqtigaaga si aad diiradda u saarto hawlaha iibka qiimaha sare leh sida raadinta iyo wacyigelinta macaamiisha badeecadaada ama adeeggaaga. Waxaa muhiim ah in la helo nidaam kuu oggolaanaya inaad si fudud ula xiriirto macaamiisha iyo rajooyinka adiga oo aan saacado ku bixin raadinta cinwaanada emaylka ama lambarrada taleefanka.
Tiirarka Iswada iibinta
Saddexda tiir ee otomaatiga iibinta waa CRM, otomaatiga suuqgeynta, iyo aaladaha iibka. CRM waa nidaamka maareynta xiriirka macaamiisha. Haddii aadan haysan CRM waxaad lacag kaga tagaysaa miiska. CRM (Maareynta Xiriirka Macmiilka) waa aalad muhiim u ah meherad kasta, waxayna ka sii muhiimsan tahay meherad leh websaydh eCommerce ah. Is -iibinta otomaatigu waa geedi socod ka caawiya dadka wax iibiya inay sida ugu macquulsan u hufnaadaan. Waxaa muhiim u ah dadka wax iibiya inay sida ugu macquulsan u noqdaan kuwo hufan maxaa yeelay iibka badan ee ay samaystaan, waxaa badanaya lacagta shirkadoodu samayso, iyo inta lacag badan ee shirkadoodu samayso, waxay ku guulaystaan ​​inay noqdaan adeegyo. Waxaa jira saddex arrimood oo waaweyn oo ku saabsan otomaatiga iibka: raadraaca, otomaatiga, iyo warbixinta. Is -iibinta otomaatigu waxay ku saabsan tahay adeegsiga softiweer si meesha looga saaro hawlihii aan caadiga ahayn ee soo noqnoqda ee habka iibkaaga. Waxay kaa caawin kartaa inaad waqtigaaga fasaxdo si aad diiradda u saarto dhinacyada muhiimka ah ee ganacsigaaga. Tusaalaha wanaagsan ee otomaatiga iibinta waa kartida jadwalka emaylka dabagalka. Haddii aad tahay ganacsade yar ama wakiil iibiya, waxaa laga yaabaa inaad ka daashay inaad waqti badan ku bixiso maamulka oo aadan ku filnayn iibinta. Inta badan milkiilayaasha meheradaha yaryar iyo wakiilada iibinta waxay adeegsadaan xaashiyaha ama aaladaha sida Excel si ay ula socdaan howlaha, hogaaminta, iyo fursadaha.
Sidee ganacsigaagu uga faa'iidaysan doonaa Automation -ka Iibka?
Iswada iibinta waa goos dahab ah oo suuqgeyn ah. Waa sida ugu wanaagsan ee aad naftaada uga dhigto mid hufan intii suurtogal ah marka ay timaado xiritaanka iibka. Waa hab lagu xirayo iibin badan si dhaqso leh oo hufan waxayna kaa caawineysaa hubinta inaad ka shaqeyneyso rajooyinka saxda ah ee ganacsigaaga. mid ka mid ah khaladaadka ugu badan ee aan arko milkiilayaasha meheradaha yaryar ayaa sameeya waxay u malaynayaan in sababta oo ah inay yihiin ganacsi yar aysan u baahnayn qalab iyo qalabayn. Laakiin otomaatigu kaliya kama saarto dadka geedi socodka, waxay kaloo ka caawisaa sidii ganacsigaagu u noqon lahaa mid hufan oo baaxad leh. Automation -ka iibku wuxuu ka caawiyaa ganacsiyada inay si hufan u shaqeeyaan oo waxay caawiyaan inay waqtiga badbaadiyaan. Waxay kaa caawin kartaa inaad waqtiga badbaadiso oo aad dhisto xiriirro. Waxaa la sheegay in Automation -ka Iibintu uu kaydin karo ilaa 30 saacadood toddobaadkii xaaladaha qaarkood. Taas micnaheedu waa inaad diirada saari karto waxyaabaha run ahaantii adiga muhiim kuu ah.